आइपीएल २०२०ः खेलको समय परिवर्तन हुनसक्ने, आज हुँदैछ निर्णय – Everest Dainik – News from Nepal
आइपीएल २०२०ः खेलको समय परिवर्तन हुनसक्ने, आज हुँदैछ निर्णय
काठमाडौंः इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) को सञ्चालन परिषद्ले म्याचको समयबारे आज छलफल गर्दैछ । परिषदले आज आसन्न आइपीएलको राति हुने म्याचको समय परिवर्तनबारे छलफल गर्न लागेको हो । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार आइपीएल २०२० देखि राति ८ बजे हुने म्याच ७ वा साढे सात बजेदेखि नै सुरु गर्नेबारे छलफल हुँदैछ । यसको आधिकारीक फैसला आज सार्वजनिक हुनेछ ।
यस्तै आइपीएल २०२१ का लागि टीम संख्या थप हुनेबारे पनि चर्चा भइहेको छ । दुई फ्रेन्चाइज टीम जोडेर १० बनाउनका लागि माग भइरहेको भारतीय मिडियाले लेखका छन् । साथै आइपीएलको समय अवधि २ महिना बनाउनुपर्ने पनि माग भइरहेको छ ।
पन्जाबले पहिलोपटक आइपीएलको उपाधि जित्नसक्ने ३ कारण
३. लगातार केएल राहूलको शानदार प्रदर्शनः गत सिजनमा पनि केएल राहूलले शानदार ब्याटिङ गरेका थिए । उनी आइपीएलमा आफ्नो टीमका लागि ब्याटिङका साथ विकेटकीपिङ पनि गर्छन् । आइपीएल २०२० मा उनले कप्तानीको जिम्मेवारी पनि पाएका छन् । रवीचन्द्रन आश्विन दिल्ली क्यापिटल्स गएपछि राहूलले टीमको नेतृत्व गर्ने जिम्मा पाएका हुन् । पछिल्लो समय उत्कृष्ट लयमा देखिएका राहूल आइपीएलमा पनि यही लयलाई दोहोर्‍याएमा उनी आफ्नो टीमलाई उपाधि दिलाउन सक्ने छन् ।
२. सन्तुलित टीमः सन् २०१४ मा पन्जाब आइपीएलको फाइनलमा पुगेको थियो । तर, उपाधि भने जित्न सकेन् । योपटकको आइपीएल संस्करण जित्ने पन्जाबले पक्कै योजना बनाएको छ । योजना सफल बनाउन सन्तुलित टीमको आवश्यकता पर्छ । यस्तो सन्तुलित टीम पन्जाबसँग छ । उसँग क्रिस गेल, ग्लेन म्याक्सवेल, निकोलश पूरन, जिमी नीशम, शेल्डन कोट्रेल लगायत विदेशी स्टार खेलाडी छन् । यीसँगै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएका मोहम्मद शामी, मयंक अग्रवाल, करुण नायर लगायत खेलाडी पनि पन्जाबसँग छन् । अनुवभी र युवा खेलाडी मिश्रित टीम भएकाले पन्जाबले उपाधि जित्नसक्छ ।
१. टीम व्यवस्थापनमा परिवर्तनः आसन्न आइपीएलका लागि पन्जावले टीममा केही परिवर्तन गरेको छ । उसले टीमको मुख्य प्रशिक्षकमा पूर्व भारतीय स्टार क्रिकेटर अनिल कुम्बलेलाई नियुक्त गरेको छ । पन्जाबले ब्याटिङ कोचमा वसीम जाफर फिल्डिङ कोचमा जोन्टी रोड्स र बलिङ प्रशिक्षकमा कर्टनी वाल्सलाई टीममा भित्र्याएको छ । प्रशिक्षकसँगै पन्जाबले टीमको कप्तान पनि परिवर्तन गरेको छ । आइपीएल २०२० मा पन्जाबको कप्तानी केएल राहूलले सम्हाल्ने छन् ।
ट्याग्स: आइपीएल, इन्डियन प्रिमियर लिग